अमेरिकामा कोरोना संक्रमित संख्या २५ लाख नाघ्यो, ब्राजिलमा ५५ हजारको मृत्यु ! « News24 : Premium News Channel
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित संख्या २५ लाख नाघ्यो, ब्राजिलमा ५५ हजारको मृत्यु !
काठमाडाैँ, १२ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट संक्रमित हुनेकाे कुल संख्या २५ लाख नाघेकाे छ ।
विभिन्न तथ्यांक निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्सका अनुसार अमेरिकामा शुक्रबार बिहानसम्म कुल संक्रमित संख्या २५ लाख ४ हजार ५८८ पुगेकाे छ । बिहीबार एकै दिन मात्र त्यहाँ ४० हजारभन्दा बढी जनामा संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । याे अघिल्ला दिनहरूकाे तुलनामा निकै बढी हाे । अमेरिकामा हालसम्मकै बढी दैनिक संक्रमणका केस बिहीबार नै फेला परेका हुन् ।
तर अमेरिकामा काेराेना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या विश्वमै अधिक रहेकाे छ । त्यहाँ हालसम्म १ लाख २३ हजार ७८० जनाकाे भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेकाे छ । बिहीबार त्यहाँ काेराेनाबाट ६४९ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । मृत्युका केसहरूमा भने दैनिक उतारचढाब जारी छ । अघिल्लाे दिन त्यहाँ ८१२ काे मृत्यु भएकाे थियाे ।
उता अमेरिकालाइ पछ्याइरहेकाे ब्राजिलमा भने संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढिरहेकै छ । ब्राजिलमा पछिल्लाे समय संयुक्त राज्य अमेरिकाकाे भन्दा पनि बढी दैनिक मृत्यु र संक्रमणका केस फेला परिरहेका छन् । बिहीबार त्यहाँ पनि दैनिक संक्रमित संख्या अमेरिकाकै हाराहारी ४० हजारबढी फेला परेका छन् ।
ब्राजिलमा बिहीबार एकै दिन ४० हजार ६७३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । काेराेना भाइरसकै कारण त्यहाँ बिहीबार १ हजार १८० जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । अघिल्लाे दिन बुधबार पनि त्यहाँ १ हजार १०३ जनाकाे ज्यान गएकाे थियाे भने ४० हजार ९ सयभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका थिए ।
अहिलेसम्म ब्राजिलमा काेराेना संक्रमणका कारण कुल ५५ हजार ५४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर त्यहाँ निकाे हुने दर पनि बढी छ । ब्राजिलमा हाल काेराेना संक्रमित कुल संख्या १२ लाख ३३ हजार नाघेकाे छ भने निकाे हुनेकाे संख्या ६ लाख ४९ हजार नाघेकाे छ । हाल त्यहाँ ५ लाख २८ हजार मानिस संक्रमित अवस्थामै छन् ।